Mifidy izay sakaiza tia an'Andriamanitra
"Ho tafara-dàlana ve ny roa, raha tsy efa nifanaiky?" Amô. 3:3.
Tsy miova ny Tompo (...) Marina Izy, be famindrampo, mahari-po ary mahatoky eo amin'ny fanatanterahana ny Teniny, na ny teny fikasana izany na ny teny fampitandremana. Anankiray amin'ireo zava-doza lehibe indrindra manjo ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny fikambanany amin'ny tsy mpankato an' Andriamanitra, indrindra fa amin'ny alalan'ny fanambadiana amin'ny tsy mpino. Ho an'ny maro dia takon'ny fitiavana olombelona ny fitiavana an'Andriamanitra. Mamerimberina ny fahadisoany hatrany izy ireo amin'ny fahasahiana mandika tsotra izao ny didy mazava nomen'ny Tompo. Fihemorana tanteraka no vokatr'izany matetika. Efa hita porofo hatramin'izay fa zava-doza ho an'ny olona ny manatanteraka ny sitrapony izay tsy araka ny fitakian'Andriamanitra akory. Sarotra ho an'ny olona anefa ny mianatra fa tsy mba mivazivazy Andriamanitra. Araka ny fahita, ireo izay misafidy ho namana na sakaizan'ny olona izay manda an'i Kristy sy manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra, dia hanana izany toe-tsaina sy toe-panahy izany koa amin' ny farany. — ST, 19 May 1881.
Raha irintsika ny hanana fahamendreham-pitondran-tena ambony indrindra ka hanatratra ny fahatanterahan'ny toetra feno fahamasinana, dia zava-dehibe tokoa ny fisafidianana ny namana sy izay ho sakaiza rahatrizay eo amin'ny fiainana (...)
Maro ireo nanana fiatomboham-piainana toy ny maraina mahafinaritra sy mahavelom-panantenana tokoa teo amin'ny sehatra voafetra nisy azy. Tahaka an'i Sôlômôna teo amin'ny toerana ambony nisy azy anefa, dia very ny fanahiny noho ny dingana noraisiny teo amin'ny lafiny fanambadiana, izay sady tsy izy no tsy azo iverenana intsony ka nahatonga ny fiainan'ny hafa hidiran-doza tahaka ny azy koa (...) Ny namana maivan-tsaina izay tsy mba manaraka fitsipi-piainana hendry, dia mamily ny fon'ireo izay efa nanana toetra mendrika sy marina teo aloha, ho amin'ny zava-poana sy ny fahafinaretana manimba ary ny fahazarana ratsy tanteraka. HR May 1878.
Tokony hahaliana antsika fatratra ny famonjena ny tsy mibebaka ka tokony hanana toe-tsaina feno halemem-panahy sy fanajana azy ireo isika. Azontsika atao tsara anefa ny misafidy ho namana ireo izay sakaizan'Andriamanitra. — ST, 19 May 1881.